Hoy i Bill Gates Bitcoin dia fahita firy teknolojia izay niteraka fahafatesana amin'ny fomba mivantana - Blockchain News
Febroary 27, 2018 Admin
Hoy i Bill Gates Bitcoin dia fahita firy teknolojia izay niteraka fahafatesana amin'ny fomba mivantana
Ao amin'ny Reddit AMA tamin'ny Talata, ny Microsoft cofounder sy manan-karena indrindra eto amin'izao tontolo izao ny olona Bill Gates naneho ny finoana fa ny anarana dia tsy ao ambadiky ny cryptocurrencies “zavatra tsara,” nampiany hoe mahasoa ny fiaraha-monina, rehefa afaka mamantatra-bola ny fitondram-panjakana launderers, hetra evaders, ary ny fanohanana ara-bola ny olona mpampihorohoro.
“Ny tena mampiavaka ny cryptocurrencies dia ny anarana. Tsy mino aho fa izao no zavatra tsara. Ny fitondrana fahaizana mahita famotsiam-bola sy ny hetra ary ny mpampihorohoro famatsiam-bola dia zavatra tsara,” Bill Gates nanoratra.
Bill Gates ihany koa nilaza fa manana cryptocurrency “niteraka maty amin'ny fomba somary mivantana,” manamarika ny aina izay zava-mahadomelina azo novidina nomerika mampiasa vola an-tserasera.
“Amin'izao fotoana izao dia ampiasaina amin'ny cryptocurrencies mividy Fentanyl sy ny zava-mahadomelina hafa toy izany dia fahita firy teknolojia izay niteraka maty amin'ny fomba somary mivantana. Mino aho fa ny tombantombana sy ny onja manodidina ICOs cryptocurrencies dia faran'izay mampidi-doza ho an'ireo izay mandeha lava,” hoy izy.
KEEP YOUR EYES On JULY 14th, B ...
►I Trade On Bybit: ny https://www...
The World’s RICHEST SECRET BIL...
Previous Post:Coinbase nanao 43% ny ny 2017 fidiram-bola nandritra ny Desambra
Next Post:50 Cent fitoriana ny niraharaha, ary nilaza fa tsy nanana BitCoins
revistas hoy i:
March 1, 2018 amin'ny 2:26 AM
Profile hoy i:
March 2, 2018 amin'ny 7:58 AM
ices hoy i:
Aprily 26, 2018 amin'ny 4:01 PM